Booliska oo beeniyey warkii guddoomiye ku-xigeenka Wadajir, sheegayna sida ay wax u dhaceen | Dalkaan.com
Home Warkii Booliska oo beeniyey warkii guddoomiye ku-xigeenka Wadajir, sheegayna sida ay wax u...
Booliska oo beeniyey warkii guddoomiye ku-xigeenka Wadajir, sheegayna sida ay wax u dhaceen
Muqdisho (dalkaan) – Booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar shalay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajir Ciise Sharaawe Cabdi uu sheegay in lagu dili rabay kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen gaarigii uu saarnaa.
Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa beeniyey inuu jiray qorshe degan oo la doonayey in lagu dilo Ciise Sharaawe Cabdi.
Cabdifataax ayaa sheegay in ciidanka booliska oo hawlgal ka waday bar kontorool oo ku taalla Wadajir ay qabteen Mooto Bajaaj taargo la’aan ah kadibna uu milkiilihii lahaa Mootada dalbaday ciidamo hubeysan, taasoo sababtay inuu dagaal ka dhex qarxo ciidamada Booliska iyo kuwa uu dalbaday ninkii watay Mootada.
Taliyaha ayaa sheegay in dagaalka u dhaxeeyey booliska iyo ciidamada weerarka soo qaaday uu kusoo dhex dhacay guddoomiyaha siyaasadda degmada Wadajir, isagoo carabka ku adkeeyey inuusan aheyn qorsho isaga ka dhan ah.
“Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda Wadajir waxaa uu si lama filaan ah uu kusoo galay shaqaaqo u dhaxeysay militariga iyo Booliska, waxayna ciidamada ilaalada guddoomiyaha sameeyeen iska caabin,” ayuu yiri afhayeenka booliska.
Afhayeenka Booliska ayaa sidoo kale sheegay in shaqaaqada dhacday uu ku geeriyooday askari ka tirsan ciidanka booliska iyo askari ka tirsan militeriga oo kamid ahaa ragga weerarka soo qaaday halka laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Sidoo kale, afhayeenka ayaa sheegay in dhacdadaan loo soo qabtay illaa seddex qof islamarkaana ay booliska ku wadaan baaritaan dibna ay kasoo sheegi doonaan natiijada kasoo baxda.
Cabdifataax ayaa ugu dambeyntii waxaa uu ka digay in magaalada Muqdisho dhexdeeda lagu wato gaari ama Mooto Bajaaj taargo la’aan ah, wuxuuna sheegay in qofkii lagu helo laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga.
Previous articlePaul Pogba oo laga yaabo inuu u ciyaaray Manchester United kulankii ugu dambeeyay.
Next articleDEG DEG: Hub ka yimid Iran oo la shaaciyey inuu kusoo qul-qulayo Soomaaliya
Wararka Suuqa Caawa: Heshiiska Cusub ee Paulo Dybala, Raphinha oo u...
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Caawa oo aad Habeen walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Halyeyga Brazil Rivaldo ayaa aaminsan in xiddiga...
Barcelona oo isku dayday inay Ousmane Dembele ka iibiso Manchester City...
Mohamed Salah: ‘Waxaan doonayaa inaan joogo Liverpool ilaa aan ka fariisto...
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi oo soo diyaariyay shax ka kooban...
Chelsea oo Dalab Cusub ka Gudbineysa Xidiga Sevilla ee Jules Kounde